Maamulka Khaatumo Oo Beeniyay In Ciidamada Puntland Iyo Somaliland Ku Dagaallameen Sool – Goobjoog News
Maamulka Khaatumo State ayaa been abuur ku sheegay in ciidamo ka kala tirsan Somaliland iyo Puntland ay ku dagaallameen deegaanno ka mid ah gobalka Sool.
Gudoomiyaha baarlamaanka Maamulkaasi Maxamuud Sheekh Cumar oo u waramay Goobjoog News ayaa sheegay in aanay jirin dagaal Labadaasi dhinac ku dhexmaray Sool, waxaana uu tilmaamay in Labadaasi maamul aanay jirin meel ay ka taliyaan.
“Idaacadaha wey ka sheegan karaan laakiinse deegaanno ay maamulaan ma jirto, dhulka waa dhul Khaatumo, cidda aad rabtaan weydiiya, Labadaasi maamul kuma dagaallamin dhulkeena, waxaana idiin sheegayaa anaga in aan meelo badan ku sugannahay cid nagu soo xadgudbi kartaa malahan” ayuu yiri Gudoomiyaha baarlamaanka Khaatumo.
Dhinaca kale gudoomiye Maxamuud Sheekh Cumar ayaa u hambalyeeyay dhigiisa cusub ee Galmudug, waxaana uu kula dardaarmay in si cadaalad ah uu shaqada u wado, islamarkaana uu ka shaqeeyo sidii loo gaari lahaa nabad iyo midnimo.
Maamulka Khaatumo State ayaa sheegay in uu ka taliyo Sool, Sanaag iyo Cayn, hase ahaatee gobaladaasi waxaa ku sugan ciidamo ka kala tirsan Puntland iyo Somaliland, inta badanna waxaa halkaasi ka dhaca dagaallo.